Beach soccer – Tamaga Midôla : Tafita mialohan’ ny fotoana i Melaky -
AccueilRaharaham-pirenenaBeach soccer – Tamaga Midôla : Tafita mialohan’ ny fotoana i Melaky
Voahaja ny lôjika. Tao anatin’ny andro efatra nifaninanana teo amin’ny taranja beach soccer amin’ilay “Festival Tamaga Midôla”, mbola tsy resy mihitsy ry zareo avy any Melaky. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina ao Toamasina eny amin’ny tora-pasiky ny Bord.
Araka izany, fandresena efatra tao anatin’ny lalao efatra natrehany no azon’i Melaky hatreto. Omaly, teo amin’ny andro fahefatry ny fifanintsanana mantsy, mbola nandavo an’i Brickaville tamin’ny isa mazava, 8 noho 6 izy ireo. Niady ny fihaonan’ny roa tonta tamin’izany, satria tao anatin’ny ampahatelom-potoana roa voalohany, mbola nahavita nanohitra tsara ry zareo avy any Brickaville, ary sahala 6 noho 6 ny lalao tamin’izany. Teoamin’ny ampahatelom-potoana fahatelo farany, nanomboka nanova stratejia i Melaky, ka nanomboka nanao fanafihana haingam-pandeha sy mahery vaika. Teo no nanomboka tsy nahatohitra intsony i Brickaville, ka lasa toa ny nanao fanazaran-tena indray ireto mpifanandrina taminy, ary dia nivoaka ho mpandresy tamin’io isa voalaza etsy ambony io.
Teo amin’ny fihaonan’i Manakara sy Analanjirofo, sambany nahita fandresena iry ekipa voalohany, hatramin’ny nanombohan’ny fifanintsanana. Nahavita nandavo an’Analanjirofo tamin’ny isa tery dia tery, 5 noho 4, ry zareo avy any Manakara teo amin’iny andro fahefatry ny fifanintsanana iny.
Na izany aza anefa, tsy nampiova ny filaharana ankapobeny vonjimaika teo amin’ny vondrona “A” sy “B” izany. Mbola i Mahajanga hatrany no mitarika eo amin’ny vondrona “A” arahin’i Toamasina eo amin’ny laharana faharoa. Mitana ny laharana fahatelo i Toliara raha fahefatra i Mananjary, ary fahadimy farany amin’io vondrona io kosa i Sainte-Marie.
Mbola i Melaky kosa no mitana ny lohany vonjimaika eo amin’ny vondrona “B” misy azy. Manaraka azy eo amin’ny laharana faharoa Analanjirofo raha fahatelo i Morondava. Mitana ny laharana fahefatra i Brickaville, ary mitana ny rambony amin’ny filaharana, eny fa na dia nahazo fandresena aza tamin’iny omaly iny i Manakara.
Ankoatra izay, manomboka anio kosa no hiaka-tsehatra ary miara-dalana amin’ny fifaninanana beach soccer ny eo amin’ny beach volley sy beach handball, ary ny beach rugby.
Tsiahivina hatrany fa ny vola azo mandritra ny “Festival Tamaga Midôla” dia atolotry ny fikambanana Tafaray hanampiana ny Hopitaly Be ao Toamasina.
Mpiara-miasa akaiky, sady mpanohana ity hetsika ity kosa ny Vondrona RLM Communication, izay ivondronan’ireo gazety an-tsoratra sy haino aman-jery maromaro, toa ny La Ligne de Mire, Triatra, La Dépêche de Madagascar, Le Citoyen, Akon’i Madagasikara, La Chasse Info, 24h Mada, On Air Radio/TV, sns…